अभिनेत्री रेवती भन्छिन्- 'फिल्म उद्योगका १४ व्यक्तिले यौन शोषण गरे'
मुम्बई – मलयालम फिल्मकी अभिनेत्री रेवती सम्पतले आफूलाई फिल्म उद्योगका १४ व्यक्तिले यौन शोषण गरेको खुलासा गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैको नाम सार्वजनिक गर्दै यो कुराको खुलासा गरेकी...
गतबर्ष डिभोर्स गरेकी नायिका मिनिषा प्रेममा रहेको खुलासा
काठमाडौं । बलिउड नायिका मिनिषा लाम्बाले सन् २०१५ मा बिहे गरेकी थिइन् । तर, उनको बैबाहिक जीवन लामो समयसम्म चल्न सकेन । गतबर्ष मिनिषाले आफ्ना पतिसँग डिभोर्स गरेकी थिइन् ।
योनिच्छेद भएको मेरो पहिलो यौन सम्पर्क
विवाहपछि सामाजिक तथा कानुनी तवरमा यौनसम्पर्क राख्न छुट हुन्छ, अरू बेला यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता हुँदैन । पहिलो पटक कायम गरिएको यौनसम्पर्कमा पुरुषको लिंग उत्तेजना नहुने, शीघ्र स्खलन हुने समस्या सिर्जना...
यौन क्रियाकलापको बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो । तर, यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाई रहेको पाइन्छ । खासमा शारीरिक क्रियाकलापमा...
कट्रिना र विक्की प्रेममा रहेको खुलासा
एजेन्सी । बलिउडमा नायिका कट्रिना कैफ र नायक विक्की कौशलको प्रेम चर्चा चलेको केही समय भयो । केही दिन अगाडि मात्र विक्की कट्रिनाको अपार्टमेन्टमा केही घन्टा बसेका थिए । यसपछि,...
धरहराको टुप्पोमा पुगेर राजेश हमालले काटे केक
काठमाडौं । वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । तर, धरहराको काम भने सकिएको छैन । सर्वसाधारणका लागि धरहरा चढ्न खुल्ला गरिएको छैन ।
भैसीको बच्चालाई दिशाको चुम्बन !
मुम्बई – अभिनेत्री दिशा पाटनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । बलिउडको उनी प्रख्यात र ग्ल्यामर अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा हालै उनले एक तस्वीर शेयर गरिन् । जुन तस्वीरमा...
अचानक मुटुमा समस्या आएपछि कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई अस्पताल भर्ना गरियो
काठमाडौं । कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन्।
अचानक उनको मुटुमा समस्या आएपछि उनलाई शनिबार बिहान काठमाडौंको गंगालाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनलाई शुक्रबार रातिदेखि छाती...
७१ वर्षीया मोडल स्विमसुटमा र्‍याम्पमा देखिएर पारिन् चकित
सिड्नी – उमेर केवल एउटा अंक मात्र हो । यो भनाई हालै एक ७१ वर्षीया मोडलले मोडलिङ मञ्चमा साबित गरेकी छन् । सारा ग्राण्ट नामकी यी मोडलले अष्ट्रेलियन फेसन विकमा...
टाइगर र दिशा विरुद्ध किन भयो एफआइआर दर्ता ?
एजेन्सी । बलिउड नायक टाइगर श्राफ र नायिका दिशा पटानीका विरुद्ध मुम्बई पुलिसले एफआइआर दर्ता गरेको छ । यी दुई कलाकारलाई जुन १ तारिखमा मुम्बइमा घुमफिर गरिरहेको समयमा प्रहरीले सोधपुछ...
एका बिहानैको सेक्स उत्तम ,सेक्स कतिपटक गर्ने ?
सेक्स गर्ने कुनै निश्चित समय छैन न त कति पटक गर्ने भन्ने कुनै वष्तुनिष्ठ सिद्धान्त नै । मानिसहरु आफ्नो समय र उपयुक्तताका आधारमा यौन कर्म गर्ने गर्दछन् ।यद्यपी अधिकांशले भने...
कण्डम नलगाई गरिने मर्निङ सेक्स उत्तम
सेक्सका लागि सबैभन्दा उत्तम समय कुन हुन सक्छ ? धेरैजसो जोडीको मनमा यो सवाल उठिरहेको हुन्छ । जोडीको इच्छा र उपयुक्त वातावरण मिलेमा सेक्सका लागि कुनै समय कुरिरहनु आवश्यक त छैन...
अभिनेता अमिताभ बच्चन अब सनी लियोनीको छिमेकी
मुम्बई– मनोरञ्जन जगतका कलाकारहरुले प्रायः नयाँ घर या सम्पत्ति खरिद गरेको समाचार आइरहन्छन् । केही दिनअघि मात्र अभिनेत्री सनी लियोनीले पनि घर किनेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
अमर उजालाका अनुसार...
ओलीलाई दीपकराजको व्यंग्य : आजकल ‘बा’का कुरा सुन्दा टाउको ठोक्न मन लाग्छ
काठमाडौं– अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कलाकारमा पर्छन् । राजनीतिक विषय होस् या अन्य, उनी निकै चोटिलो किसिमले स्टाटसमार्फत व्यंग्य गर्छन् ।
शुक्रबार पनि उनले एक स्टाटस लेखे...
कोरोनाबाट निर्देशक सुबोध चोपडाको निधन
काठमाडौं–निर्माणको तयारीमा रहेको नेपाली फिल्म ‘माइतीघर २’का निर्देशक सुबोध चोपडाको कोरोना संक्रमणका कारण भारतको मुम्बईमा निधन भएको छ । अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले निर्माण गर्न लागेको यो फिल्ममा उनी...
निर्माता ताराचन्द्रले १० शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाए
चलचित्र निर्माता, समाजसेवी तथा व्यवसायी ताराचन्द्र बजगाईं ‘निशान’ले १० शय्याको अक्सिजनसहितको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेका छन् । उनले मकवानपुरको बकैंया गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित रहेको हात्तीसुँडे सामुदायिक स्वास्थ इकाईमा...
अभिनेत्री स्वेताका श्रीमानको कोरोनाबाट निधन
काठमाडौं–अभिनेत्री स्वेता भट्टराईलाई पति शोक परेको छ । उनका श्रीमान मिलन सापकोटालाई कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारको क्रममा मंगलवार चावहिलस्थित एक अस्पतालमा निधन भएको हो ।
परिवारका अनुसार अक्सिजन लेभल कम भएपछि...